musha Kanadha Singers Justin Bieber Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yedu Justin Bieber Biography inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Nyaya dzerudo, Mararamiro, Hupenyu hwePamoyo uye Net Kukosha.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevadiki uye vanobudirira pop nyeredzi yenguva yake. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Justin Bieber's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Justin Bieber Wehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kune ekutanga maBiography, ane zita rekuti "JB". Justin Drew Bieber akazvarwa pazuva re1st raKurume 1994 kuchipatara cheSt.Joseph kuOntario, Canada.
Aive iye ega mwana akazvarwa kuna amai vake Pattie Mallette (mumwe chete achiri kuyaruka amai panguva iyoyo) uye kuna baba vake Jeremy Bieber (uyo akapatsanuka naamai vaJustin mushure mekuzvarwa kwake).
Nezve kumashure kwemhuri yake, amai vaJustin ndevekuFrench -Canada chizvarwa uku baba vababa vake vari vekwaGerman. Iye zvakare ane yeChirungu, yeIrish neScotland midzi.
Baby Justin akakurira kuStratford, guta reShakespearean riri kuSouth Western Ontario. Stratford inonyatsozivikanwa nokuda kwezviitiko zvetsika zvinowanzopa zvikuru yeStratford Shakespeare Festival yegore negore iyo inowedzera unyanzvi hwemifananidzo uye mimhanzi.
Zvichida akakurudzirwa nemitambo yekumusha kwake nemitambo yemimhanzi, Justin akatanga kufarira mimhanzi achiri mudiki uye akapihwa dhiramu naamai vake vakamurera pamwe chete nasekuru nasekuru vake.
"Ndanga ndichigunun'una pane zvese zvandaigona kuwana maoko angu"anoyeuka Justin achifarira zvikuru mimhanzi.
Achifambira mberi kubva pakuziva kutamba ngoma, Justin akadzidza uye aive akanyanyisa kugona kuridza gitare, Piano pakati pezvimwe zviridzwa zvaaigona kuisa maoko pamusoro.
Iye anofungidzirwa zvakanyanya kunge akagara nhaka matarenda ake kubva kuvabereki vake sezvo amai vake vachiimba zvakanaka, baba vake mutambi wegitare uye ambuya vake vaimbove muridzi wepiyano.
Uyu mukomana wechiCanada aivewo anoshanda nesimba mubhidhiyo nemitambo yemumunda iyo yaisanganisira mitambo yehuduku hwake. Mitambo inosanganisira chess, bhora, basketball, hockey uye skateboard.
Justin Bieber Dzidzo:
Pattie Mallette (amai vaJustin) vakave nechokwadi chekuti mwanakomana wavo waBright akanyoreswa muchikoro chekutanga chekunyudza chiFrench chinozivikanwa seJeanne Sauve Catholic chikoro.
Sarudzo yekudzidza pachikoro iyo inoraira vadzidzi muFrench yakaburitswa kunze kwekuti amai vaJustin vaive neFrance-Canada midzi uye zvaizoda kuti mwanakomana wavo ave nechidimbu cheiyo mamiriro.
Justin akafamba zvakanaka pachikoro mushure meizvozvo kufambira mberi pakudzidza akamuona akachengetedzwa kuSt. Michael Catholic Sekondari kuStratford. Ndichiri kuchikoro chesekondari, Justin akaita kuda kwake mimhanzi nekutora chikamu mumakwikwi.
Chinonyanya kuzivikanwa pakati pemakwikwi aive makwikwi emunharaunda akarongwa mukutanga kwa2007 kuStratford. Justin (ane makore gumi nemaviri) akasaina uye akahwina chinzvimbo chechipiri nekugona kwake kwakanyanya kuimba Ne-Yo'e "Saka Anorwara".
Kukunda makwikwi akaita zvakanaka zvakawanda kuzvivimba kwaJustin paakange achifambira mberi nekuimba nziyo dzemabhendi ane mukurumbira nenzira yakarova vazhinji sevapfuura mavhezheni ekutanga.
Amai vaJustin, kune rumwe rutivi, vakatsanangura zvese zvaiitwa nemwanakomana wavo nekuzviisa paYouTube, chiitiko chakaita kuti nyeredzi yemumhanzi iri kuuya izivikanwe pane saiti.
Justin Bieber Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Hazvina kutora nguva refu YouTube isati yadzokororwa matambiro aJustin pamwe neakakura online ekutevera akabata pfungwa dzaScooter Braun, aimbove mumhanzi mukuru Saka Saka Def Recordings uyo akakanganisa kugumburwa paYustin chiteshi cheYouTube.
Makore gare gare, Braun aigona kutsanangura izvo zvaainzwa mushure mekubhurawuza kuburikidza naJustin's YouTube chiteshi.
"Ura hwangu hwainge hwopenga, uchindiudza nezvekudiwa kwekumutevera."
Braun aive asiri wekukudziridza tsoka dzinotonhora sezvaakateedzera Justin kuenda kuStratford kwaakakurukura nezvehurongwa hwekufambira mberi kwaJustin naamai vake.
Pattie Mallette, zvisinei, angatadza kuisa mwanakomana wake kuna Braun nekuda kwekuti mutambi wemimhanzi aive wechiJuda. Akarangarira achinyengetera;
“Mwari, ndakamupa kwamuri. Unogona kunditumira murume wechiKristu, anzi muKristu! ” Mwari, hamudi here kuti mwana wechiJuda uyu ave murume waJustin? ”
Zvakatora kupindira kwevakuru vechechi yake kuti vamuvimbise kuti Justin aive mumaoko akachengeteka asati arega zano raBraun rikunde.
Justin Bieber Biography - Simuka Mukurumbira:
Braun akabhururutsa Justin naamai vake kuenda kuAtlanta kwavakanyorera mademo eAlbum yaAlbum. Ivo zvakare vaive nemisangano naUsher Raymond uyo Braun waakambopfupikisa nezvekutsvaga mimhanzi inokurumidza kusimukira.
Zvakabva zvaitika kuti Justin Timberlake aifarirawo kunyora mabhizimisi mashoma emimhanzi, zvisinei, Justin akasarudza kusunga na Usher uye akasaina kuRaymond Braun Media Group (RBMG), kubatana pakati pe Braun na Usher.
RBGM's, zvakare, yakacherekedza Justin Bieber neIsland Records mugore ra2008. Mushure mezvo, nyika yakave oyster yaJustin nekuburitswa kwake kwekutanga "kamwechete" muna2009.
Rwiyo rwacho rwakatora machati emimhanzi yeCanada uye nekukurumidza rakaunganidza mamirioni emaonero paYouTube.
Mugore rimwe chetero "manzwiro ekuimba" akaburitsa dambarefu rake reMy World iro raive nenziyo nomwe.
CD rakatengeswa muzviuru mukati mevhiki rekutanga kuburitswa uku dhisiki raive rakasimbiswa platinamu muCanada neUnited States.
Kuna Justin, pakanga pasina imwe nzira irinani yekupemberera kisimusi yegore rakabudirira sezvaakaita muWhite House yaBarack Obama nemukadzi wake Michelle nekuimba "Rimwe zuva paKisimusi" yaStevie Wonder. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Justin Bieber Anoda Hupenyu:
Pakupera kwa2010, chinamato chaBieber chakatevera kuzivikanwa se'Bieber Fever 'chakange chakanyanyisa zvekuti vateveri kunyanya vanhukadzi vaifarira hupenyu hwake.
Kufarira kwacho kwainyanyisa zvekuti Twitter pikicha ye "Mucheche Crooner" na Kim Kardashian akaona vekupedzisira vachigamuchira kutyisidzirwa nerufu kubva kumusikana waJustin wannabees.
Mazuva akatevera, (Zvita 2010) Justin akafananidzirwa achigovana nemusikana wake Serena Gomez.
Shiri dzerudo dzakasangana kekutanga mu2009 mushure meBraun Scooter (uyo akazove maneja waJustin) akafonera amai vaSerena (zvakare maneja wake panguva iyoyo) kuti vamuudze kuti Justin aida kuva naSelena zvakadii.
Vakaburitsa kiyi sevaroorani pazviitiko zvakakosha zvinosanganisira maOscar muna Kukadzi 2011 uye vakapa kubvunzurudzwa kwakakurumbira pakati pawo kubvuma kwaJustin kuti aida Serena sei kuPeople Magazine;
“Ari kupisa. Ehe mukomana wese anoda musikana kuti apise, zvinova Serena. Iye munhu chaiyeiye uye ndinofunga ane nyemwerero yepasirose. ”
Ukama hwavo hwakagadzirwa naJelena haana kumira muyedzo wenguva sezvo Justin akazove musimboti wezvaipomerwa kubva pakubereka mwana we fan, Mariah Yeater kusvika pakuonekwa uchinyangira kubuda muhotera yemhando yepamusoro.
Jelena akatanga kuitumidza kuti inopera mu 2012 mushure mekuve neukama hwakapedza mwedzi 18.
Saka zvakatanga zvakateedzana zvekurambana uye kusangana zvakare pakati peiyo duo. Muchokwadi, webhusaiti inozivikanwa iyo inonyora hukama hukama yakanyorwa kuti Jelena atyora ndokusanganazve nguva gumi neshanu kusvika munaKurume 13 apo "kurambana" kwakachengeta zvazvinoreva zvechokwadi muhupenyu hwavo.
Justin Bieber Untold Biography Chokwadi - Kuroora kuna Hailey Baldwin:
Justin naHailey vakatanga kusangana muna 2009 mushure mokunge baba vekupedzisira vaudza mumwe nomumwe.
Ivo vaviri vaive shamwari dzeplonic apo Justin achiri kufambidzana naSerena. Muchokwadi, Hailey aive achitsigira hukama hwaakamboita tweet iyo yaiverenga;
“Handina basa nezvinotaurwa nemunhu asi Justin Bieber naSelena Gomez pamwe chete ndiyo tsananguro yehope dzevechidiki! #izwi ”.
Mifananidzo iri kuratidza kuti duo yaive nehukama hwepamuviri yakatanga kupararira mu2014 apo yaifananidzirwa kuChechi ya Hillsong pamwechete. Kuramba makuhwa Justin akadhinda selfie pa Instagram nemashoko.
“Vanhu vanopenga. Ini handisati ndaroora uye iyi ndiyo shamwari yangu yakanaka ungazive neimwe nzira [sic] ”
Makore gare gare, vakagovana yavo yekutanga Instagram Kiss muna Ndira 2016, vakagara kunze kweradar kweanenge makore maviri chete kuti vabude pamwechete muna Chivabvu. 2. Vakatovimbisana musi wa2018 Chikunguru apo Justin paakaburitsa mubvunzo padyo neresitorendi muBahamas.
Chiitiko ichi chakaonekwa nevatevedzeri veresitorendi avo vakaudzwa kuti vaise nharembozha dzavo.
Nekukurumidza kumberi kwaGunyana 2018 Justin akanzwika achitaura nezvaHailey semukadzi wake pachiratidziro che "Bieber, Matanho kuStardom" yakatsaurirwa pabasa rake, paStratford Perth Museum muOntario, Canada kutanga kwaGumiguru 2018.
Uye zvakare, Hailey akasiya meseji inotapira, "Ini ❤ iwe nokusingaperi-Hailey B" kumuseum. Hazvina kutora nguva risati rasvika iro meseji iro raionekwa sechinhu chekuziva nezvewanano yavo rakatumirwa neyemyuziyamu pane yayo Instagram, ine chinyorwa;
"Takafara kwazvo kuva neshamwari yakasununguka uye yakashanyira inoshanyira musamuvhuro zuro (pamwe chete nemurume wake chaiye?)."
Justin Bieber Hupenyu Hwemhuri:
Justin Bieber ndiye ega mwana akazvarwa kuvabereki vake tinokuunzira mashoko echokwadi pamusoro pababa naamai vake.
Pamusoro paamai vake; Patricia Elizabeth Mallette anozivikanwa saPattie ndiye amai vaJustin Bieber.
Amai vasina murume avo vakarera kufarira kwemwanakomana wavo mumimhanzi vakashandawo semaneja wavo pamberi peBraun Scooter asati apinda mumufananidzo.
Muna 2012, Pattie's biography Hakuna kupi asi Kumusoro: Iyo Nyaya yaAmai Justin Bieber yakabudiswa.
Inotsanangudza kurerwa kunetsekana kwaPattie uyo akashungurudzwa pabonde kakawanda pamwe nesarudzo yake yekushandura kusiyiwa uye kuva mubereki mumwe kuve kutenda kwakasimba uye hupenyu hwakazadzwa naGrace netariro.
Pamusoro pababa vake; Jeremy Bieber ndiye baba vaJustin Bieber. Kunyangwe Jeremy akaidana kuti inopera naamai vaJustin (waakange asina kumbobvira aroora naye) mushure mekuzvarwa kwemutambi wepop, akachengetedza hukama hwepedyo nemwanakomana wake zvichipesana nezvakawanda zvinopomedzerwa zvekuti akamuka zvakare mushure meJustin Rise to Fame.
Aive asati akura. Akaenda segore randaive nemakore angangoita mana, akaenda kuBritish Columbia, akadzoka paZuva raBaba '. Pane fungidziro yekuti baba ndibaba vakaurayiwa, asi anga ari muhupenyu hwangu kubvira. akashungurudzwa Justin.
Jeremy, parizvino anofarira zveMartial akaroora kaviri mushure mekuparadzaniswa naPattie. Nekuda kweizvozvo, ndibaba vevana vaviri: Jasmyn (ane makore 9) naJaxon (ane makore 8).
Vese vana vakazvarwa kwaari neaimbove mukadzi wake Eric Wagner. Iye zvakare ane mwanasikana, Bay akazvarwa kwaari gore rino nemukadzi wake wazvino Chelsey.
Justin Bieber Dzidzo - Kupedza Kudzidza kubva kusekondari:
Justin Bieber akapedza chikoro chesekondari yeSt Michael's Ontario mu2012. Kunyange zvazvo muimbi wacho akapukunyuka achienderera mberi pamutambo wake wokutanga kuchikoro, zita rake rakarongeka murongwa.
"Tinodada naJustin nevamwe vese 192 vakapedza kudzidza paSt Michael chikoro,"vakati mukuru Tim Doherty.
Justin anosarudza kupedza diploma yake kumba-kuchikoro pashure pokubva kuStratford ne Scooter Braun mu2008. Maererano naDan Parr, mutungamiri weboka rekuchikoro;
"Justin anofarira kuita kuti dzidzo yake inyarare"
Saka zvaive zvisingashamisi apo Justin asina kutaura nezvekupedza kwake kudzidza pa Twitter kunyangwe achitaurisa nezve EURO 2012 uye wake asina kuroorwa "chero bedzi uchindida". Iye, zvakadaro, aive nemhemberero yekuseka paEllen DeGeneres yemasikati show.
Justin Bieber Anokakavara Nemutemo:
Kunyange chiri chokwadi chisingarambike kuti basa raJustin Bieber hapana kwaari kuenda asi kumusoro, nyaya dzake nemutemo dzinoita sedziri kuwedzera nemakore. Tinokuunzira mutsara wenguva weizvo vazhinji vakafunga sehunhu hwake husingadzoreke pamwe nekumwe kusungwa kwake.
Chikunguru 2013: Vhidhiyo yakaburitswa yakatora Justin achizvinunura mumubhodhoro wemopu. Akapfapfaidza pikicha yaBill Clinton neyaitaridzika kunge dziye achishevedzera "F *** Bill Clinton". Justin, zvakadaro, akapa ruregerero kuna Clinton gare gare.
January 2014: Justin akasungwa pamusana pekunyunyuta kweBDI uye achikudha racing. Akakumbira mhosva uye akaitwa kubhadhara $ 50,000 mhiko kune rubatsiro rwechidiki sechikamu chekubvunzwa kwechirwere.
Ndira 2014: Justin akasungwa nekuda kwechiitiko chekukanda zai kumba kwemuvakidzani. Sechikamu chechibvumirano chekuteterera, akatongera makore ekuedzwa, akarairwa kuti apedze gumi nemaviri svondo rekudzora hasha makirasi, kushanda mazuva mashanu ebasa renharaunda uye kubhadhara $ 12 yekudzosera mari kumuvakidzani wake.
Mbudzi 2016: Justin akapomerwa mhosva yekurova fan muBarcelona sezvo vhidhiyo yechiitiko ichi ichiita sekutora ruoko rwake achisangana nemurume wechidiki ane ropa.
Justin Bieber Bio - Kwete Just Music:
Justin haasi zvose nezvemimhanzi. Ane makore akawanda akatora nguva yekufadza vatendi (vateveri vake) nekutaridzika kwake muzviratidzwa zveterevhizheni uye mafirimu anoonekwa pakati pawo ndeaya: CSI: Kuongorora kweCrime Scene (2010), Zvakaipa 25 (2012), Zoolander 2 (2016), uye akakwereta izwi rake kuna KITT in Kuuraya Hasselhoff (2017).
Justin Bieber Zvemunhu Zvokwadi:
Munhu wese anoziva Justin Bieber inyanzvi uye mimhanzi. Kuwedzera kune humwe unhu hwake;
Compassion; Sezviri pachena munzira iyo Justin akasvika nayo kumutori wemifananidzo uyo netsaona akadonhedzwa pasi nerori rake achisiya sevhisi yeBeverly Hills.
Muimbi akabuda kuzobatsira murume uyu akamirira kuti mabasa enjodzi asvike. Uye zvakare, muimbi uyu ndomumwe wevakakurumbira vanehukama.
Inokuvadza: Sezviri pachena mukuwonekera kwake kwakawanda nepaparazzi, kupfira mate mafeni nevavakidzani, achiputa mbanje mundege iyo vatyairi vake vaifanira kupfeka kumeso kumeso, pakati peimwe miitiro yekukasira.
Kunyangwe akanzi anga aine zvikamu nemurapi mu2014, hazvina zvakawanda zvachinja pamusoro pake uye wekupedzisira haasati anzwikwa nezvekushushikana kwake.
Justin Bieber Chokwadi:
Justin akambocheka nekutengesa bvudzi rake kwe $ 12,000 paBay. Yakatengesa madhora zviuru makumi mana.
Akambosvika kumberi kwekambani muSalt Lake City, Utah, nekuda kwekuti akashanyira musikana ane makore gumi nemana ari muchipatara.
Justin anoshanyira mall muguta rimwe nerimwe raanoshanyira.
Mudzidzisi wake ndiye Will Smith uye vanotaura kamwe kamwe vhiki.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Justin bieber Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!